Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 9)
WhatsApp wuxuu ku qasbaa dadka isticmaala inay xaqiijiyaan inay yihiin 16 sano jir
WhatsApp waxay weydiisataa dadka isticmaala inay xaqiijiso inay ugu yaraan yihiin 16 sano. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cabbirka xakamaynta dalabka cusub si aad ugu hoggaansato xeerarka cusub ee Yurub.
Telefoonada gacanta ee Nougat waa dhamaadeen: Android Oreo ayaa noqon doona nooca ugu yar
No more mobiles with Nougat: Android Oreo waa nooca ugu yar. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka Google ee joojinta shahaadada taleefannada Android Nougat.
Albamkaaga galka ah ee kumbuyuutarka ah ee gebi ahaanba bilaashka ah
Codsi aan kuheleyno moobilkeena gacanta ee Android suurtagalnimada ah soo qaadashada kaararka kubada cagta dalwaddii gabi ahaanba bilaash ah oo aan ku dhameystirno albumkeena kaarka kubada cagta dalbada iyadoo aan hal euro lagu qarash gareeynin.
Galaxy A3 2017 wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo Android Oreo
Cusbooneysiinta muddada dheer la sugayay ee Android Oreo ee loogu talagalay Galaxy A3 2017 ayaa durbadiiba bilaabay inay diyaar u ahaadaan dadka isticmaala ee ku nool Ruushka, markaa ma ahan inay waqti dheer qaadato si ay u gaarto Yurub inteeda kale.
Xiaomi waxay soo saareysaa taleefano badan oo wata Android One
Xiaomi waxay soo saari doontaa taleefano badan oo wata Android One. Waxaad waxbadan ka ogaataa qorshayaasha sumcadda Shiinaha ee ah in noocyadan Android ah ay ku isticmaalaan taleefannadooda.
Google Pay ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku darto tikidhada lagu raaco iyo tikidhada
Google Pay waxay lahaan doontaa taageero tigidhada iyo kaararka lagu raaco. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaamaha uu barnaamijku soo bandhigi doono goor dhow.
Cusbooneysiinta Galaxy S7 ee Android Oreo ayaa dib u dhacday illaa May
Wararkii ugu dambeeyay ee noo imanaya ee la xiriira Galaxy S7 waxay muujinayaan in soo saarista nooca ugu dambeeya ee Android Oreo uu dib u dhac ku yimid muddo bil ah, illaa bartamaha Maajo.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee meme ee loogu talagalay Android
Afarta barnaamij ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan loo heli karo taleefannada Android kaas oo kuu oggolaan doona inaad sameysid memes kuu gaar ah.
Barnaamijyada ugu fiican ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee 'Android'
Afarta barnaamij ee ugu fiican diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee 'Android'. Soo ogow barnaamijyadan si aad ah waxtar ugu leh dhammaan adeegsadayaasha leh diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Sida loo kiciyo dhaqdhaqaaqa tilmaanta taleefannada MIUI
Sidee tilmaanta dhaqdhaqaaqa ay u hawlgasho MIUI 9.5. Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan qaadno si aan ugu hawlgalino shaqadan taleefanka Xiaomi oo leh noockan lakabaynta qaabeynta.
Tilmaamo si loo ilaaliyo xisaabtaada Gmail
Afar talo oo lagu ilaaliyo xisaabtaada Gmail. Soo hel talaabooyinkan fudud si aad u ilaaliso asturnaanta iyo amniga koontadaada Gmail.
Khiyaamada ugu fiican ee smartwatch-kaaga ee leh 'Android Wear'
Tabaha ugu fiican ee saacadaha leh 'Android Wear'. Baro taxanahan khiyaanooyinka loogu talagalay adeegsadayaasha saacad leh Wear Android. Sidan ayaad wax badan uga heli doontaa smartwatch-kaaga.
Ciyaaraha kaararka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican kaararka Android ee maanta la heli karo. Soo ogow xulashada cayaaraha kaararka ee aan hadda ka heli karno Android.
Beddelka ugu wanaagsan ee Android ee Opera VPN
Shanta ugu sarreysa ee Android ee Opera VPN. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan Android oo beddel wanaagsan u ah Opera VPN oo albaabada u laabi doona dhammaadka Abriil.
Facebook wuxuu cusbooneysiiyaa dejinta asturnaanta iyo qaabka app-ka
Facebook wuxuu cusbooneysiiyaa dejinta asturnaanta heerka cusub ee Yurub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan isbeddelada shabakadda bulshada ay ku soo bandhigeyso arjiga sababo la xiriira imaanshaha sharci cusub oo asturnaanta.
La kulan Ulefone Power 5, mobiil wata batari aad u weyn oo 13000mAh ah
Ulefone, shirkadda Aasiya, waxay noo keenaysaa Ulefone Power 5, oo ah badhtamaha dhexdhexaadka ah ee Android oo leh batari aad u weyn oo cajiib ah oo gaaraya 13.000mAh kaasoo noo ballan qaadaya dhawr maalmood oo la isticmaalayo iyada oo aan laga walwalin xeedho iyo fiilo. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Sida loogu daro mootada moobilada gacanta ee Android 8.1 Oreo
Waxaan ku tusineynaa sida loo helo font Product Sans, font-ka adeegsada Android 8.1 Oreo, qalabkaaga oo wata cashar fudud si aad u siiso muuqaalka dhammaadka-sare ee taleefankaaga oo wata Android 5.x wixii ka dambeeya. Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah!
Sida loo habeeyo badhannada Android ee shaashadda iyada oo aan loo baahnayn xidid. [Android 7.0+]
Talo bixin fiidiyoow ah oo aan ku tusayo codsi bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo noo oggolaan doona inaan u qaabeyno badhannada Android ee shaashadda adigoon haysan terminal xididaysan
Google Pay wuxuu gaarayaa 100 milyan oo laga soo dejisto Play Store-ka
Nidaamka lacag bixinta elektarooniga ah ee Google, Google Pay, ayaa hadda dhaafey 100 milyan oo laga soo dejiyey Play Store.
Soo degso APK-ka shabakadda 'Lite browser'
Shirkadda weyn ee loo yaqaan 'e-commerce' ee 'Amazon', ayaa Hindiya ka soo saartay bog cusub oo 'Browser' web browser ah, biraawsar astaamihiisu tahay mid aad u fudud oo aad u dhakhso badan.
Samsung Galaxy A5 2017 wuxuu bilaabaa inuu helo Android Oreo 8.0
Cusbooneysiinta muddada dheer la sugayay ee Android Oreo ee loogu talagalay Galaxy A5 2017 ayaa hadda bilaabay inay diyaar u tahay soo dejinta.
Qaab cusub oo layaableh oo qufulan Android. Sii garaac !!
Talooyin fiidiyoow ah oo aan ku tusayo codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo kuu oggolaan doona adiga qaab cusub oo cajiib ah oo qufulka Android ah, hab aad uga badbaado badan qaabka furitaanka, PIN, lambarka sirta ama sawirka faraha.
Had iyo jeer On the Galaxy S9 on kasta oo Android ah
Casharrada fiidiyowga ah ee aan ku sharraxayo sida loogu helo Had iyo jeer On of the Galaxy S9 on kasta oo Android ah hab aad iyo aad u fudud oo aan loo baahnayn xidid.
Bluboo S3, mobiil dhaqaale oo wata batari dhan 8500mAh
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Bluboo S3, terminal kaas oo dhammaan astaamahiisa iyo qeexitaankiisa farsamo lagu yaqaanay dhowr maalmood hadda, lagana iibin doono Banggood laga bilaabo berrito, Abriil 18 qiime ka hooseeya 165 euro.
Sida loo abuuro sawir-qaade qaab-dhismeedka loo yaqaan 'Edge-style'
Casharro fiidiyoow ah oo aad u fudud oo aan ku sharraxayo sida loo abuuro sawir-gacmeedyo gees-gees ah si loo shaashado shaashadda qalooca ee boosteejada Samsung
Android Oreo wuxuu gaaraa 4,6% saamiga suuqa
Android Oreo waxay leedahay saamiga suuqa 4,6%. Raadi wax badan oo ku saabsan warbixinta qaybinta Android ee bisha Abriil oo muujinaya horumarka Oreo ee suuqa.
In ka badan 3.300 codsiyo Android ah oo wadaaga xogta carruurta yar yar ayaa la ogaaday
3.300 codsiyo Android ah oo basaasnimo ku ahaa carruurta yar yar ayaa la ogaaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan u heellan helitaanka iyo wadaagista xogta carruurta yaryar.
Telefoonka Razer wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Oreo
Telefoonka Razer wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android 8.1 Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta bilaabeysa inay ku soo dhacdo taleefanka ciyaaraha.
Android P wuxuu xasuusan doonaa mugga qalab kasta oo ku xiran Bluetooth
Android P wuxuu xusuusan doonaa mugga qalabka ku xiran Bluetooth. Raadi wax badan oo ku saabsan astaantan cusub ee lagu soo bandhigi doono markii Android P suuqa ku dhacdo dhawr bilood gudahood.
WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad weydiisato lacag xiriiro kale
WhatsApp waxay soo bandhigeysaa ikhtiyaarka ah inaad weydiisato lacag xiriirada. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan astaantan cusub ee barnaamijka ee ka shaqeynaya lacag-bixinta xiriir-si-xiriir ah ee Hindiya.
Sida loo qaabeeyo loona xakameeyo khariidadaha laga soo dejiyey Khariidadaha Google
Sida loo qaabeeyo khariidadaha laga soo dejiyey Khariidadaha Google. Soo ogow qaabka aan u qaabeyn karno una xakameyn karno khariidadaha aan ka soo dejisanno Khariidadaha Google.
Sida loo rakibo Donald Duck Augmented Reality Emoji ee Galaxy S9
Waxaan hadda ku raaxeysan karnaa AR Emoji ee Donald Duck oo ku yaal Galaxy S9 iyo Galaxy S9 +. Haddii aadan aqoon sida loo rakibo, qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Barnaamijyada xisaabta ee ugu wanaagsan Android
Afarta barnaamij ee xisaabta ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulitaankan barnaamijyada xisaabta ee aan u helno taleefannada Android.
Ciyaaraha Android laguma talinayo caruurta yar yar
4 Ciyaaraha Android laguma talinayo caruurta yar yar. Soo ogow xulitaankan cayaaraha Android ee aan lagula talinaynin kuwa yaryar oo leh qiimeyn PEGI 18.
Dhammaan codsiyada Apple ee ku yaal Play Store
Codsiyada Apple ee loo heli karo Android ee ku jira Play Store. Soo hel liiskan codsiyada Apple ee aan ka heli karno Play Store.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee sigaar joojinta
Afarta barnaamij ee ugu fiican Android ee joojinta sigaarka. Soo hel xulashada barnaamijyada Android ee noo oggolaanaya inaan si joogto ah u joojino sigaar cabista.
Sida loo kiciyo habka bidix ee Android
Sida aad ugu dhaqaajin karto habka bidix ee Android. Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan fulino si aan ugu hawl galino habka bidix ee taleefankeena.
Android P waxay lahaan kartaa dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq sida iPhone X
Android P sidoo kale wuxuu yeelan karaa hawo tilmaam. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daadadan ku siiyay fikirkaaga waxaana la qiyaasayaa in cusbooneysiintu ay sidoo kale yeelan doonto tilmaam tilmaam.
Shaki la'aan macaamiisha ugu wanaagsan Facebook Lite ee leh Messenger shaqeynaya
Casharrada fiidiyowga ah ee aan ku tusayo waxa aniga maanta ii ah macmiilka ugu fiican Facebook Lite oo leh Messenger dhammaystiran oo shaqeynaya.
LG waxay soo bandhigi doontaa cusbooneysiin dhakhso leh iyada oo ay ugu mahadcelineyso xarunta horumarinta barnaamijkeeda
LG waxay furaysaa xarun horumarineed si loo hagaajiyo barnaamijka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda ee xaruntan oo ay ku doonayaan inay ku soo bandhigaan hagaajinta barnaamijka taleefannada.
Google waxay rabtaa inay kala soocdo balastarka amniga Android iyo soosaarayaasha
Google waxay soo bandhigi doontaa isbeddelada ku saabsan dhejiska amniga. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qorshooyinka shirkadda ee dooneysa inay soo bandhigto isbeddellada ku dhaca balastarka amniga ee taleefannada Android.
Amniga Android: Sida loo isticmaalo dukaamada kale ee loo yaqaan 'Play Store' si badbaado leh
Casharro fiidiyow ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan amniga Android kaas oo aan ku sharraxayo sida loogu isticmaalo dukaamada kale ee Google Play Store si ammaan ah loogu soo dejiyo loona rakibo apks.
Habka ugu wanaagsan ee laba WhatsApp loogu wada isticmaalo isla taleefanka casriga ah
Tababarka fiidiyowga oo aan ku barayo inaad ku qaadatid laba WhatsApp oo isku mid ah Smartphone isla markaana si fiican u wada shaqeeya isla markaana aanad ku cunin ilo aad u badan oo ku saabsan Android-kaaga.
Casharka fiidiyowga ah ee aan ku tusayo sida loo kiciyo labbada jeer si aad u demiso shaashadda iyada oo aan xidid laga dhigin ama aad raacdo casharro been abuur ah oo adag.
Nokia 3 wuxuu cusbooneysiiyaa Android 8.0 Oreo
Nokia 3 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefankaaga nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka, kaas oo bilaabay in la sii daayo hadda.
Sida loo joojiyo otoplay-ka fiidiyowyada YouTube-ka
Joojinta dib u soo celinta tooska ah ee fiidiyowyada barnaamijka YouTube-ka ee loogu talagalay Android waa geedi socod aad u fudud oo aan uga fogaan doonno inaan ku lumino xogta sicirkeenna si aan waxtar lahayn.
Sida loo rogo Android galay iPhone X
Tababarka fiidiyowga oo aan ku tusayo sida loogu rogo Android-ka iPhone X, in kasta oo xasillooni aynaan ka lumineynin Android maxaa yeelay waxaas oo dhami waa muuqaal.
Blackview P10000 Pro: 11.000 mAh baytari leh adeegsi hooseeya
Blackview P10000 Pro: Ku gudub tijaabada isticmaalka batteriga. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka soo maray tijaabadan batteriga oo ku dhaafta dhibaato la'aan.
Xiaomi waxay u fureysaa beta caalamiga ah ee Android Oreo Mi 5, Mi MIX iyo Mi Note 2
Xiaomi Mi 5, Mi MIX iyo Mi Note 2 waxay helayaan Android Oreo beta. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijka beta ee si rasmi ah ugu furmaya saddexda taleefan ee astaanta Shiinaha.
Ulefone S7 Go: Taleefanka cusub ee wata Android Go (Oreo Edition). Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan moodeelka cusub ee sumadda Shiinaha oo dhawaan suuqa soo geli doona.
Sida loo rakibo kamaradda Nokia-ka wixii ku jira Android kasta
Muqaal Video ah oo aan ku tusayo sida loo rakibo kamarada Nokia-ka ah Android kasta. Kaamirada cusub ee Nokia oo leh xulashooyin aad u xiiso badan sida kamarad labajibaaran ama qaabka PRO.
Sida loogu abuuro istiikarada shaqsiyadeed qaab aad u fudud
Casharro fiidiyow ah oo la taaban karo oo aan ku tusiyo habka ugu fudud uguna xiisaha badan ee lagu abuuri karo istiikaradaada shaqsi ahaaneed ee aad u adeegsan karto shabakadahaaga bulshada ama meel kasta oo aad rabto.
Smartisan Nut 3 waxaa lagu muujiyey batari weyn oo 4000mAh ah
Smartisan wuxuu noo keenayaa Smartisan Nut 3, mobilo cusub oo wata naqshad quruxsan oo caato ah oo dhererkeedu yahay 7.16mm oo keliya, iyo batari aad u weyn oo 4.000mAh ah, shaki la'aan, wuxuu ina siin doonaa ismaamul wanaagsan oo naga dhigi doona illoobi fur iyo xeedho in muddo ah
Xeeladaha YouTube-ka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Khiyaamo si aad ugala baxdo YouTube-ka Android-ka. Soo ogow khiyaamadan kuu oggolaanaya inaad si fiican uga faa'iideysato arjiga caanka ah.
Barnaamijyada Android si ay u baaraan dukumiintiyada
Codsiyada ugu wanaagsan ee Android si loo baaro dukumiintiyada. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadan aan ku awoodi doonno inaan si sahal ah ugu baari karno dukumiintiyada taleefannadeenna Android.
Qalabka la cusbooneysiiyay ee Android Oreo oo la jaan qaadaya Mashruuca 'Treble'
Ilaa maantadan, tirada aaladaha loo cusbooneysiiyey Android Oreo oo la jaan qaadaya Mashruuca 'Treble' weli wali aad ayey u yar yihiin. Waxaan ku tusinaynaa kuwaas oo ah terminaalka iswaafajin kara maanta.
Sida loo qaado shaashadda Samsung Galaxy S9
Sida loo qaado shaashadda shaashadda Galaxy S9. Soo ogow saddexda dariiqo ee aan u adeegsan karno si aan uga helno shaashadda taleefanka Samsung ee ugu sarreeya.
Sida loo beddelo amarka badhamada Galaxy S9
Sida loo beddelo amarka badhamada shaashadda Galaxy S9. Soo ogow sida ugu fudud ee aad ugu badali karto nidaamka badhamada shaashadda dhamaadka-sare.
5 kulan Android oo aan lahayn internet
5 kulan oo loogu talagalay taleefannada Android oo aan lahayn xiriir internet. Soo ogow xulitaankan cayaaraha taleefannada Android ee aan u baahnayn xiriir internet si aad u shaqeyso.
Codsiyada darbiyada ugu fiican ee shaashadda AMOLED
Barnaamijyada waraaqaha gidaarka ee taleefannada AMOLED. Soo ogow xulitaankan barnaamijyada loogu talagalay Android ee loogu talagalay dadka isticmaala taleefannada leh shaashadda AMOLED.
APP-ga ugu fiican ee lagu maareeyo codsiyada
Haddii aad tahay isticmaaleyaasha rakibidda, ka-tirtirka ama wadaagista barnaamijyo badan, qoraalka fiidiyowga ah ee aan maanta kuu keenayo wuxuu ...
Archos Saphir 50X: Taleefanka cusub ee rooga ah ee wata batari weyn
Archos Saphir 50X: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Daahfurka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee rooga ah ka raadi astaanta Faransiiska ee horay ugu sii jirtay Yurub.
[APK] PlayMX ma shaqeeyo, hadda waxaa loo yaqaan MasDeDe waana tan ay na siiso oo dhan
Waxaan si buuxda u eegaynaa PlayMX-ka cusub waxaanan ku lifaaqnay xiriiriye si aad u soo dejiso barnaamijka 'MasDeDe APK', kaasoo hadda laga heli karo Google Play Store
Cajiib, fudeyd, deg deg ah, shabakad xayeysiis xayeysiin leh astaamo qabow badan
Muuqaal fiidiyow ah oo aan ku tusayo shabakad shabakadeed oo cajiib ah, dhakhso, iftiin leh xayeysiin xayeysiis ah oo aad ufiican iyo ikhtiyaarro xiiso leh sida qaadashada shaashadda ee bogagga Websaydhka oo dhammaystiran.
Qalabka saacadaha bilaashka ah ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android-kaaga
Kajawaabida codsiyada badan ee noogu imaado faallooyinka iyo shabakadaha bulshada, maanta waxaan kuu keenay waxa aniga maanta ii ah kan ugu wanaagsan ee saacadda bilaashka ah ee loogu talagalay Android.
Cusboonaysiinta 'Android Oreo' ee Galaxy S7 / S7 Edge, A5 (2017) iyo A3 (2017) oo ku saabsan in la qaybiyo
Sida ku cad shahaadada ay heleen S7, A3 iyo A5 2017, siideynta cusbooneysiinta Android Oreo ayaa si rasmi ah loo bilaabayaa.
Xaqiijiyay: Galaxy S6 ma heli doono ugu dambeyn Android Oreo
Haddii ay dhacdo in qof kasta uu shaki ka qabo qorshooyinka shirkadda Kuuriya inay cusbooneysiiso Galaxy S6 ee Android Oreo, Samsung ayaa mas'uul ka ahayd xaqiijinta inaysan suurtagal noqon doonin.
Sida loo ekeysiiyo shaqada Edge ee Samsung terminals-ka Android kasta
Muuqaal fiidiyow ah oo aan ku tusineyno sida loo matalo waxqabadka Edge ee Samsung terminals nooc kasta oo ka mid ah terminaalka Android.
Sida loo rakibo ogeysiisyada Samsung Galaxy S9 ee Android kasta
Tutorial video kaas oo aan ku sharaxayo sida loo helo ogaysiisyada Samsung Galaxy S9 ee Android kasta iyada oo aan loo baahnayn in la xidido ama la raaco casharro dhalaalaya oo dhalaalaya ama wax la mid ah.
Nokia 5 iyo 6 waxay bilaabayaan inay helaan Android Oreo 8.1
Xaqiijinta ballanqaadkeeda ah cusbooneysiinta degdegga ah ee saldhigyadeeda, shirkadda Nokia ayaa billowday cusbooneysiinta Oreo 8.1 ee Nokia 5 iyo Nokia 6 2017
Android Oreo 8.1 wuxuu imanayaa Razer Phone bishii Abriil isagoo xaqiijinaya inuu ka boodayo Android 8.0
Mar labaadna waxaan sii wadaynaa inaan hubino sida nooca 8.0 ee Android uu u yahay lows adag oo loogu talagalay dadka waayeelka ah ...
Google Play ayaa ku tusi doona caan ka ahaanshaha codsiyada
Google Play wuxuu muujinayaa caan ka ahaanshaha barnaamijyada. Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelkan horay u gaadhay dukaanka codsiyada Android, oo hadda ina tusaya sida codsiyada caanka ah ay yihiin.
Sida loogu wareejiyo barnaamijyada kaarka SD-ka ee Galaxy S9 iyo S9 Plus
Sida loogu wareejiyo barnaamijyada kaarka SD-ka ee Galaxy S9 iyo S9 Plus. Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan fulino haddii aan rabno inaan u wareejino codsiyada kaarka SD ee Galaxy S9-keena.
Ciyaaraha ugu fiican ee ka hooseeya 25 MB ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu fiican ee ka hooseeya 25 MB ee loogu talagalay Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulkan cayaaraha miisaanka culus ee miisaankoodu yar yahay oo si fudud loogu soo dejisan karo taleefankeenna Android.
Sida loo demiyo Bixby Samsung Galaxy S9
Sideed uga joojin kartaa Bixby Samsung Galaxy S9. Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si kaaliyaha loogu demiyo taleefanka dhamaadka sare qaab fudud.
WhatsApp ayaa badalaysa ogeysiiska sababo la xiriira isbadelka lambarka taleefanka
WhatsApp wuxuu badalayaa ogeysiiska sababo la xiriira isbadelka lambarka taleefanka Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan isbeddelada uu codsigu ku soo bandhigayo ogeysiiskan siinaya fursado badan isticmaalayaasha
Barnaamijyada naqshadeynta garaafka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Afarta barnaamij ee ugu wanaagsan ee naqshadeynta garaafyada ee Android. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan kaa caawin doona haddii aad xiisaynayso naqshadeynta garaafka.
Sida loo qariyo magaca Huawei P20 ama P20 Pro
Sida aad ugu qarin karto qormadan Huawei P20 ama P20 Pro. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shaqada kuu oggolaanaysa inaad ka qariso Huawei taleefannada cusub ee heer sare ah.
MyFitnessunes app waa la jabsaday
MyFitnessunes waa la jabsaday, waxaa lagugula talinayaa inaad bedesho furaha sirta ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan khawanada ku dhaca barnaamijka. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa dadka isticmaala inay sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah u beddelaan lambarkooda sirta ah ee arjiga.
Abka ugufiican ee TV-ga DTT looga daawado iyadoo la adeegsanayo taageerada Chromecast. (DTT Bilaash ah, Raadiyaha iyo Saxaafadda)
Codsi xasaasi ah si aad uga daawato DTT mobilkaaga ama aad ugu dirto waxyaabaha ku jira TV-gaaga ku xiran adoo adeegsanaya Chromecast. Barnaamij-dhan-hal ah oo aad ka daawan karto TV-ga, dhageysan karto idaacadaha Isbaanishka isla markaana aad ula socon karto wararka adoo si bilaash ah u akhrinaya saxaafadda Isbaanishka.
Xidho Falanqeeyaha Horudhaca OS 1: Nooca cusub ee Wear OS hadda waa dhab
Xidho Falanqeeyaha Horudhaca OS 1 hadda ayaa loo heli karaa soo dejinta. Ka ogow wax badan oo ku saabsan nooca hordhaca ah ee ugu horreeya ee nidaamka hawlgalka ee dib loo cusboonaysiiyay ee loogu talagalay smartwatches Google.
ARCore 1.1 wuxuu yimaadaa Samsung Galaxy S9, Huawei P20, Xiaomi Mi Mix 2S iyo inbadan
Samsung Galaxy S9, Huawei P20, Xiaomi Mi Mix 2S waxay helayaan ARCore 1.1. Raadi wax badan oo ku saabsan Google Augmented Reality oo ku soo dhacaya taleefannada cusub ee cusbooneysiinta cusub.
Facebook wuxuu hagaajiyaa goobaha asturnaanta ka dib fadeexad
Facebook wuxuu soo bandhigayaa hagaajinta goobaha asturnaanta. Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelada ku yimaada shabakadda bulshada ee aan ku qancin dadka isticmaala ama khubarada.
Filimada Google Play & TV waxay la midoobaan adeegyada kale ee socodka
Filimada Google Play & TV waxay la midoobaan adeegyada kale ee socodka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan go'aanka Google ee ku-biirinta abka barnaamijka adeegyo kala duwan oo qulqulaya oo ku yaal Mareykanka.
Ku soo qaado Nomu S30 mini kaliya 81.74 Euros, Taleefan casri ah oo wata shahaado milateri oo qarxa !!
Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo u adkaysanaya naxdin, dhibco iyo xitaa biyo iyo siigo leh shahaado milatari, Nomu S30 mini kaliya 81.74 Euros ayaa ah terminaalka aad ku raadineyso qiimo aan lagaran karin.
Samsung Galaxy Note 9 wuxuu qaadi karaa batari ku dhow 4000mAh
Galaxy Note 9 wuxuu lahaan lahaa batari 3.850 mAh ah. Raadi wax badan oo ku saabsan awoodda batteriga ee taleefanka dhammaadka-sare ee sumadda ee garaaci doona dukaamada qeybta labaad ee sanadka.
Chrome 65 wuxuu soo bandhigayaa isbadalada qaabka qarsoodi la'aanta
Google Chrome 65 wuxuu soo bandhigayaa isbeddelada qaabka qarsoodi la'aanta. Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelada lagu sameeyay qaab qarsoodi ah ee biraawsarka Google.
Moto Z wuxuu cusbooneysiiyaa Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo waxay ku timaadaa Moto Z qaab OTA ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta oo si rasmi ah u gaadha taleefanka shirkadda qaab OTA ah.
Dhammaan barnaamijyada ay leedahay Facebook ee ku jira Android
Dhammaan codsiyada ay leedahay Facebook ee loogu talagalay Android. Soo ogow dhammaan codsiyada laga heli karo Play Store ee ay iska leeyihiin Facebook.
Sida looga hortago qaabka diyaarada inuu si otomaatig ah uga hawl galo Android
Sida looga hortago habka diyaaradda ee ku jirta Android inuu iskiis isu hawlgeliyo. Raadi wax badan oo ku saabsan dhibaatadan saameyneysa qaar ka mid ah isticmaaleyaasha iyo siyaabaha kala duwan ee aan u xallin karno.
Instagram mar kale ayey isticmaali doontaa quudin taariikheed
Instagram ayaa dib u habayn ku samayn doonta qoraallada siday u kala horreeyaan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta dalabka laftiisa marka lagu soo celiyo daabacaadda sida ay u kala horreeyaan.
Ciyaaraha ugu yaabka badan ee Android
Saddexda kulan ee ugu yaabka badan Android. Soo ogow xulkan cayaaraha asalka ah ee aad si fudud ugula soo bixi karto taleefankaaga Android. Ciyaaraha ugu yaabka badan! horeyba loo heli jiray.
Beddelka ugu fiican ee Fortnite iyo PUBG ee loogu talagalay Android
Beddelka ugu fiican ee Fortnite iyo PUBG ee loogu talagalay Android. Soo ogow ciyaarahan badbaadada ee beddelka u noqon kara kuwa ugu caansan maanta.
Ciyaaraha xeebta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee xeebta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. Baro xulashadan cayaaraha xeebta ee Android. Dhamaantood waxay diyaar u yihiin inay kala soo baxaan hadda Play Store.
Waa inuu-leeyahay Barnaamijyada Android ee Ardayda
4 waa inuu lahaadaa barnaamijyada Android ee ardayda. Soo ogow xulashada barnaamijyadan oo faa'iido badan u yeelan doona ardayda dhowr jeer. Sidoo kale dhammaantood waa lacag la’aan.
Fikradaha ugu fiican iyo barnaamijyada maskaxda ku haya ee loogu talagalay Android
4 fikirka iyo barnaamijyada maskaxda ku haya ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan barnaamijyada kaa caawin doona inaad si fudud ugu nasato jimicsiga.
Kaaliyaha Google wuxuu horey kuu ogolaaday inaad lacag ku dirto Mareykanka
Kaaliyaha Google wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lacag u dirto dadka isticmaala. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee lagu soo bandhigay saaxirka isticmaalayaasha Mareykanka.
Xiaomi Mi Drop: Ku rakibida wixii Android ah iyo habka isticmaalka
Tababarka fiidiyowga ee aan ku tusayo sida loo rakibo Xiaomi Mi Drop on kasta oo Android ah iyo habka saxda ah ee loo isticmaalo in loo diro loona helo dhammaan noocyada faylasha silig la'aan.
Casharro fiidiyow ah oo wax ku ool ah oo aan ku tusayo sida loo rakibo barnaamijka rasmiga ah ee WhatsApp ee looxa 'Android Tablet'. Waxaas oo dhan iyada oo aan loo baahnayn in la adeegsado WhatsApp Web ama xeelad ama qaab kasta.
Nubia V18: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca dhexdhexaadka ah ee bilowga bishan ka dhacaya Shiinaha.
Ciyaar qosol badan oo horumar buuxa ah taas oo aan ku dayanayno khibrada PUBG Minecrafrt oo leh jilayaal leh madaxyo waaweyn oo laba jibbaaran, meydad cubic ah iyo qaab pixelated ah oo aan shakhsi ahaan u jeclahay
Xiaomi waxay cusbooneysiin doontaa in ka badan 30 mobiles MIUI 9.5
In kabadan 30 taleefannada Xiaomi ayaa cusbooneysiin doona MIUI 9.5. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefannada taleefannada ee Shiinaha ee loo casriyeyn doono noocyadan Lakabka Shakhsi ahaaneed toddobaadyada soo socda.
My Tamagotchi Weligiis, adigaaga u gaarka ah Tamagotchi ee ku dhex jira Android-kaaga
My Tamagotchi Forever waa qaybtii ugu dambaysay ee Bandai Namco oo ah ciyaar loogu talagalay Android oo xusaysa una dabaaldegeysa sannad-guurada 20aad ee dhalashada xayawaanka xayawaanka ah ee caanka ah ee ku guuleystay dhammaadkii 90s.
[APK] Cimilada Oneplus ee Android kasta
Ma jeceshahay codsiga cimilada ee Oneplus Oneplus Weather? Hadday sidaas tahay, waxaad jeclaan doontaa qoraalkan fiidiyowga ah sida aan kuugu soo dejinayo deked si buuxda u shaqeyneysa oo aad ku rakibi karto Cimilada Oneplus ee Android-kaaga, xitaa adigoo adeegsanaya qalab-dhismeedka desktop-ka si buuxda u shaqeynaya.
Blackview P10000 Pro: shaashadda 18: 9 iyo batari 11.000 Mah
Blackview P10000 Pro: Faahfaahinta koowaad ayaa la xaqiijiyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono maalmo yar ka dib.
[APK] Gawaarida Gawaarida loo yaqaan 'Oneplus Gallery', the Oneplus gallery for any Android
Oneplus Gallery ama wixii la mid ah, Sawirka Sawirka ee Oneplus terminals ayaa hadda loo heli karaa nooc kasta oo ah nooca terminal-ka Android ah.
Google Play wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wadamada si fudud ugu bedesho
Google Play ayaa kuu oggolaan doonta inaad si fudud u beddesho dalka. Raadi wax badan oo ku saabsan aaladda cusub ee lagu soo bandhigay dukaanka barnaamijka si aad u beddesho waddankaaga haddii aad u guurtay mid cusub.
Deutsche-Telekom si ay u joojiso u habeynta taleefannada casriga ah
Deutsche-Telekom waxay joojineysaa u habeynta taleefannada casriga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan go'aanka hawlwadeenka Jarmalka ee calaamadeeya dhammaadka bloatware ee isticmaalayaasha.
Sida loo helo waxqabad deg deg ah oo Memo ah Android kasta
Ma rabtaa inaad yeelato waxqabadka Memo-ga ee caadiga ah ee ka shaqeeya LG terminals-ka nooc kasta iyo nooc ka mid ah terminal-ka Android? Hadday sidaas tahay, waxaad nasiib ku jirtaa sidii aan kuugu soo qaadan lahayn barnaamijka ugu wanaagsan ee Quick Memo oo bilaash ah.
Google Play Instant: Isku day ciyaaraha adigoon soo dejisan
Google Play Instant ayaa kuu oggolaan doona inaad ciyaar isku daydo kahor intaadan soo dejin. Raadi wax badan oo ku saabsan hindisaha cusub ee Google ee lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday San Francisco.
Xeerarka xayeysiinta ee Google Play ayaa hadda laga heli karaa Argentina, Peru iyo Chile
Seddexdii dal ee ugu dambeysay ee Google ay ku dartay liiska waddamada ay horumariyayaashu ka abuuri karaan lambarrada xayeysiinta waa Argentina, Chile iyo Peru.
Android P waxaa laga yaabaa inaysan oggolaan socodsiinta barnaamijyadii hore
Sida ay ku dhawaaqday shirkadda mashiinka raadinta, Android P wuxuu bilaabi doonaa inuusan oggolaan doonin fulinta codsiyada duugga ah iyo codsiyada gaadha Play Store waa in loogu talagalay Android 8.0
Xiaomi Mi 6 wuxuu ku biirayaa Mashruuca 'Treble'
Xiaomi Mi 6 horeyba wuxuu u lahaa taageero mashruuca 'Treble'. Raadi wax badan oo ku saabsan habka taleefanka sumadda Shiinaha uu taageero ugu helay mashruucan Google.
MIUI 9 waxaa lagu cusbooneysiiyay jawaabo deg deg ah iyo ogeysiisyo kooxaysan
Jawaabaha degdega ah iyo ogeysiisyada kooxaysan ayaa imanaya MIUI 9. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee lakabka shakhsi ahaaneed ee taleefannada Xiaomi ee bilaabaya inay ku yimaadaan moodooyinka qaarkood.
Sawirada 4D ee ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android-kaaga
Ma dooneysaa in Android-kaagu u ekaado mid xamaasad leh? Hagaag, halkan waxaan kuugu keenayaa 4D-yada ugu wanaagsan ee bilaashka ah, sawir-gacmeedyo afar-geesood leh oo aad jeclaan doontid.
Android Auto wuxuu si otomaatig ah u furayaa taleefannadeenna casriga ah markii uu ku xiran yahay
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Android Auto, nooca 2.9, waxay na siineysaa sida ugubnimada ugu weyn ee suurtagalnimada furitaanka terminaalkeena isla marka aan ku xirno gaarigeenna.
Khiyaamo lagu aqoonsado shaashadda AMOLED
Saddex khiyaano si loo aqoonsado shaashadda AMOLED. Soo hel dariiqooyinka ugu wanaagsan ee aan maanta adeegsan karno si aan u ogaano inay runti tahay shaashad AMOLED ah.
Codsiyada Android ee mobilada si loo akhriyo fariimahaaga
Soo ogow barnaamijyadan loogu talagalay Android ee ka caawin doona taleefankaaga inaad codadkaaga kor ugu aqriso, marka uma baahnid inaad wax qabatid taleefankuna wax walba ayuu kuu sheegayaa.
Sony wuxuu cusbooneysiiyaa Xperia XA1, XA1 Plus iyo XA1 Ultra ilaa Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo waxay timaadaa Sony Xperia XA1, XA1 Plus iyo XA1 Ultra. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta si rasmi ah u galeysa taleefannada nooca Japan oo ah qaab OTA ah,
Codsiyada Android si loo ogaado dhirta
Soo ogow afartan barnaamij ee Android ee waxtarka leh marka ay timaaddo u aqoonsashada dhirta qaab fudud. Dhammaantood waa la heli karaa si looga soo dejiyo taleefankaaga Play Store.
Codsiyada ugu fiican ee lagu ogaanayo wax walba oo ku saabsan taxanaha iyo filimada
Soo ogow barnaamijyadan aad awoodi doontid inaad had iyo jeer ka feejignaato wax kasta oo saameeya taxanaha aad ugu jeceshahay ama filimada aad rabto inaad aragto. Si fudud ugala soo xiriir taleefankaaga Android.
Tabaha EMUI ee ugufiican Huawei iyo Telefoonada Sharafta leh
Shan tabaha loogu talagalay EMUI oo ku saabsan taleefannada Huawei iyo Honor. Soo ogow xulitaankan khiyaanooyinka ah si aad uga faa'iideysato EMUI, lakabka qaabeynta ee taleefannada nooca Shiinaha.
Ciyaaraha tennis-ka ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee tennis-ka ugu wanaagsan Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cayaaraha ugu wanaagsan ee isboorti oo aan ka heli karno dukaanka ciyaarta. Marka waxaad heli doontaa cayaaraha tennis-ka ee ugu wanaagsan Android.
Galaxy Note 8 wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo ee Yurub
Galaxy Note 8 ee Yurub wuxuu bilaabaa inuu helo Android 8.0 Oreo. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta taleefannada sare ee Yurub.
Dukaanka Play wuxuu ka saaray 39 milyan oo barnaamijyo khatar ah
39 milyan oo barnaamijyo xumaan ah ayaa laga saaray Play Store-ka. Raadi wax badan oo ku saabsan tirooyinka lagu muujiyay warbixinta badbaadada Google.
Xiro OS: Android Wear restyling waa rasmi
Xiro OS: Nooca cusub ee Android Wear hadda waa rasmi. Raadi wax badan oo ku saabsan nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee saacadaha casriga ah ee hadda rasmiga ah isla markaana dhowaan la heli doono.
[APK] Soo dejiso oo rakib Dagmooyinka Playerunknown ee hadda. (Habka OBB)
Halkan waxaan kaaga tagayaa kahor imaatinkeeda rasmiga ah ee Google Play Store, waxkasta oo aad ubaahantahay iyo habka rakibaadda si aad ugu raaxeysato apk-ka Ciyaaraha Playerunknown's, ciyaarta ku garaacaysa Android. Nooc caalami ah oo leh dhammaan qaababka ciyaarta.
Huawei P10 iyo P10 Plus ayaa u cusbooneysiiya Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo waxay si rasmi ah u timid Huawei P10 iyo P10 Plus. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo socota labada taleefan ee ugu sarreeya ee nooca Shiinaha.
Codsiyadaani waa kuwa sababa batteriga iyo dhibaatooyinka waxqabadka ugu badan
Codsiyada soo saaraya waxqabadka ugu badan iyo dhibaatooyinka batteriga. Kala soo bax liiskan barnaamijyada dhaliya dhibaatooyinka ugu badan xagga waxqabadka iyo batteriga taleefankaaga. Mahadsanid daraasadda Avast
Florence: Ciyaar cusub oo ka timid abuureha 'Monument Valley' ayaa timaadda Android
Florence: Ciyaarta cusub ee ka timid abuureha 'Monument Valley' hadda waa la heli karaa. Ka ogow wax badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee isbeddelka qaabdhismeedka cusub ee Ken Wong sheekadan soo jiidashada leh, ee ku saabsan is-dhexgalka ee u taagan muuqaalada.
Sida loo abuuro gurigaaga guriga lagu sameeyo ee Google Home
Cashar fudud oo fiidiyow ah oo fiidiyoow ah, oo leh taleefan casri ah ama kiniin ah, nooca aan ku jiifsanno khaanadda oo aruurineysa boodh, waxaan u samayn doonnaa gurigeenna Google Home.
Cusbooneysiinta Sawirada Google ayaa ku dari doonta astaamo cusub tifaftiraha fiidiyowga
Cusbooneysiinta Sawirada Google waxay hagaajineysaa tifaftiraha fiidiyowga. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku timid arjiga soo bandhigaya hagaajinta tifaftiraha fiidiyowga.
Telefoonka Aasaasiga ahi wuxuu bilaabmaa helitaanka Android Oreo 8.1
Telefoonka Aasaasiga ah ayaa hadda bilaabay inuu helo cusboonaysiinta Android 8.1 ee dhammaan boosteejooyinka, sidaas awgeedna looga booday cusbooneysiinta Android 8.0
FC Barcelona - Chelsea waxay si toos ah ugu nooshahay barnaamijkan xiisaha leh si loogu daawado filimada, taxanaha, tv-ga iyo kubada cagta si bilaash ah
Codsi xasaasi ah ayaa laga heli karaa Google Play Store kaas oo aan ku daawan doonno FC Barcelona - Chelsea si bilaash ah oo noolow, tan waxaa u sii dheer inaan awoodno inaan aragno filimada ugu fiican ee bilaashka ah, taxanaha bilaashka ah, muusikada bilaashka ah iyo dabcan TV-ga ugu fiican adduunku sidoo kale waa bilaash.
Trick si aad uga dhigto Netease inuu mar labaad kuu shaqeeyo !!
Kadib markaan ku baray sida loo rakibo Netease oo Isbaanish ah cashar kale oo ay joojisay shaqadii, hada waxaan kuu keenay khiyaanadan xasaasiga ah ee aad Netease uga dhigi karto inaad mar labaad u shaqeyso si aad iyo aad u fudud.
OnePlus 5 iyo OnePlus 5T waxay helayaan beta-ka Android 8.1 Oreo
Android 8.1 Oreo beta wuxuu yimaadaa OnePlus 5 iyo OnePlus 5T. Labada taleefan ee heer sare ah ee nooca Shiinaha ayaa bilaabaya inay cusbooneysiiyaan nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka.
[APK] Sida loo rakibo Google Markup-ka Android P
Casharrada fiidiyowga ah ee aan kuugu soo qaadaneyno sida loo rakibo Google Markup, oo ah shaqeyn gaar ah oo Android P ah oo aad hadda ku haysatid bartaada Android.
App filter sawir xasaasi ah
Muuqaal fiidiyow ah oo aan kugula talinayo oo aan ku barayo sida loo isticmaalo codsi bilaash ah oo dareen leh si loogu daro miirayaasha sawirrada tayada cajiibka ah
Google Pay waxaa lagu dari doonaa xiriiro si lacag loogu diro
Google Pay waxaa lagu dari doonaa arjiga xiriirada. Raadi wax badan oo ku saabsan astaantan cusub oo u oggolaan doonta dadka isticmaala inay si fudud lacag ugu diraan dadka ay la xiriiraan.
Android Wear ayaa badasha magaceeda oo noqda Wear OS
Xiro OS: Android Wear ayaa si joogto ah loogu beddelay. Raadi wax badan oo ku saabsan magaca cusub ee nidaamka qalliinka smartwatch ee bilaabaya inuu gaaro dadka isticmaala,
Facebook Messenger waa la cusbooneysiiyay oo wuxuu bilaabay naqshad cusub
Facebook Messenger waxay leedahay naqshad cusub oo cusbooneysiin ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku timid arjiga farriinta ee bilaabeysa inay gaarto dadka isticmaala.
Dukaanka Play ayaa la cusbooneysiiyay isbeddelada ku saabsan marin haynta
Dukaanka Play ayaa la cusbooneysiiyay isbeddelada ku saabsan marin haynta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta dukaanka abka ee isbeddelada ku sameeya qaabkeeda si fudud.
Qalabka ugu fiican ee Android ee loogu talagalay ciyaaryahanka muusikada aad jeceshahay
Muuqaal cusub oo fiidiyoow ah oo aan kuugu keenayo midka aniga ah ayaa ah kan ugu fiican ee ku habboon ee Android ee qalabkaaga muusikada ama adeegga muusikada. Kaabis gebi ahaanba bilaash ah oo aan looga maarmi karin dhammaan boosteejooyinkaaga.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee lagu barto Shiinaha, Kuuriya ama Jabaan
5 codsiyo Android ah oo lagu barto Shiinaha, Kuuriya ama Jabaan. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan aad ku baran karto luqadahaas kuwaas oo u baahan fiiro gaar ah iyo caawimaad gaar ah.
Kaaliyaha Google wuxuu yimaadaa kiniiniyada leh Android 5.0 Lollipop
Kaaliyaha Google wuxuu yimaadaa kiniiniyada leh Android 5.0 Lollipop. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka kaaliyaha shirkadda ee kiniinnada adeegsanaya noocaan ah nidaamka qalliinka
Ciyaaraha ugu fiican ee la kordhiyay ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu fiican ee la kordhiyay ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee aad ka heli karto qaybta xaqiiqda la kordhiyay ee taleefannada Android.
Codsiyada Android si loo ogaado xawaaraha gaarigaagu socdo
Codsiyada Android si loo ogaado xawaaraha gaarigaagu socdo. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan oo kuu sheegi doona xawaaraha aad ku kaxeyso markasta oo kaa hor istaagaya inaad dhaafto xadka xawaaraha.
Xeeladaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Play Store'
Afarta khiyaano ee ugufiican ee looga faa idaysan karo Dukaanka Play. Soo ogow taxanahan khiyaanooyinka ah ee noo oggolaanaya inaan si wanaagsan uga faa'iideysanno dukaanka arjiga ee taleefannada Android. Qaabkan ayaan wax badan uga faa'iidi karnaa markaan isticmaalno.
Samsung waxay sii deyneysaa Cusboonaysiinta Amniga ee ugu horreeya ee Galaxy S9 iyo S9 +
Markii labada Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + ay kaliya suuqa joogeen dhawr maalmood, shirkadda Kuuriya waxay soo saartay cusboonaysiinta ugu horreysa ee amniga bisha Maarso.
Barnaamijyada jimicsiga ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Afarta barnaamij ee jimicsiga ugu fiican ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan afar codsi oo jimicsi oo loogu talagalay Android oo kaa caawin doona inaad qaab yeelato oo aad hagaajiso xaaladdaada iyo qaabkaaga qaab fudud.
Xeeladaha ugu fiican ee Google Chrome ee loogu talagalay Android
Xeeladaha ugu fiican ee Google Chrome ee loogu talagalay Android. Soo ogow xeeladahan fudud ee kuu oggolaanaya inaad wax badan ka hesho isticmaalkaaga Google Chrome taleefankaaga Android. Ku raaxayso tabaha ugu fiican ee biraawsarka.
Codsiyada Android si aad ugu qorsheysato qoraallada barta Instagram
Codsiyada Android si ay u jadwal ugu sameeyaan qoraalada barta Instagram. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan barnaamijyadan si aad si fudud jadwal ugu sameyso oo aad u qorsheyso qoraallada 'Instagram'. Dhammaan wixii la heli karo ee laga soo dejisan karo hadda taleefankaaga Android
Cusbooneysiinta HTC U Ultra ee Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo waxay si rasmi ah u timid HTC U Ultra. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefankaaga nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Google.
Ciyaaraha Android oo leh fariin bulsheed
Afar kulan oo Android ah oo leh farriimo iyo dhaleeceyn bulsho. Raadi wax badan oo ku saabsan cayaarahan oo doonaya in dadka isticmaala laga dhaadhiciyo dhibaatooyinka bulshada.
Android waxay badbaado u noqon doontaa dhibbanayaasha rabshadaha jinsiga
Android waxay badbaado u noqon doontaa dhibbanayaasha rabshadaha jinsiga. Raadi wax badan oo ku saabsan fikradaha shirkadaha sida BQ iyo Sony ee loogu talagalay Android si looga caawiyo ilaalinta dhibbanayaasha rabshadaha jinsiga.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Nubia N3, mobiil xarrago leh batari 5000mAh ah
Nubia N3 ayaa hadda la soo bandhigay batari weyn oo ah 5.000 milliamps kaas oo na siin doona madax-bannaani aan la tixgelin karin, oo leh shaashad 6.01-inch ah oo qaab ah 18: 9, iyo dhowr astaamo kale oo si siman u dhigi doona khilaafka. celceliska kala duwanaanta sanadkan. Baro taas!
Galaxy A8 Cusboonaysiinta Amniga Maarso Hada Waa Laheli Karaa
Ragga Samsung ayaa hadda soo rogay cusboonaysiinta amniga ee bisha Maarso ee Samsung Galaxy A8 (2018)
Android Oreo waxay u badan tahay inay sii deyso taariikhaha Galaxy Note 8, Galaxy S7, iyo Galaxy S7 Edge
Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya Turkiga ee la xidhiidha Galaxy Note 8 iyo S7, nooca ugu dambeeya ee Android Oreo ayaa si dhakhso leh u iman doona.
[APK] Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Netease 2018 oo aan xidid lahayn. AH iyo Isbaanishka !!
Muuqaal fiidiyow ah oo aan ku tusayo sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Netease 2018 ee Isbaanishka iyada oo aanad haysan terminal xididaysan ama aan raacin casharro wax ku ool ah oo adag
Jadwalka sii deynta ee Android P ayaa shaaca ka qaaday
Jadwalka sii deynta Android P ayaa shaaca ka qaaday. Waxbadan ka ogow goorta nooca ugu dambeeya ee nooca cusub ee nidaamka qalliinka Google uu imaan doono.
Nexus ma heli doono Android P. Ka ogow wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee ah in aan la siinin taleefoonada casriga ah ee Android P. Shirkadda Mareykanka ah waxaa ka go'an inay diiradda saarto Pixels.
Facebook Messenger Lite ayaa soo bandhigi doonta wicitaano fiidiyoow ah
Facebook Messenger Lite wuxuu soo bandhigayaa wicitaano fiidiyoow ah. Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee lagu soo bandhigay barnaamijka farriinta miisaanka fudud.
2 Beddelka Bilaashka ah ee Spotify
Video-post oo aan kuugu keenayo 2da kale ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'Spotify', si loogu badalo shaqooyinka aan shaqeyneyn ee mods sida Dogfood iyo wixii lamid ah.
Android P hadda waa rasmi: Ogow dhammaan faahfaahinta
Nooca ugu horreeya ee Android P waa kan: Ogow faahfaahinteeda. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca koowaad ee nooca cusub ee nidaamka qalliinka.
Ku noolow wadarta khibrada Blackberry ee Android
Fiidiyowga aan ku tusayo sida loogu noolaado dhammaan khibrada Blackberry ee Android adoo ku rakibaya dhammaan barnaamijyada Blackberry-ka, Blackberry Launcher, Xiriirada, Farriimaha, BBM, iwm, iwm.
HOMTOM HT70: Mobilada ugu caansan oo wata batari dhan 10.000 Mah oo suuqa yaala
HOMTOM HT70: batari 10.000 mAh oo taleefanka ugu dhumuc yar. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee cusub ee la bilaabi doono Abriil.
Energizer Hardcase H570S, oo ah mobile adag oo leh 18: 9 shaashad iyo batari 4800mAh ah
Shirkadda Mareykanka ee Energizer, waxay soo bandhigeysaa Energizer Hardcase H570S, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee xoog leh oo leh 18-inch FullHD + 9: 5.7 shaashad iyo awood batari oo aad u weyn oo ah 4.800mAh. Terminal-kan ayaa ku qalabaysan shahaado IP68, Mediatek MT6739 afar geesood ah SoC, 3GB RAM, iyo inbadan.
Codsi kale oo la yaab leh oo loogu talagalay wax soo saarka Smartphone-ka ama Tablet-ka
Maaddaama aad jeceshahay codsiyada qaabkan, maanta waxaan kuu keenayaa codsi kale oo la yaab leh oo ku saabsan wax soosaarka bartayada 'Android', ha noqoto Smartphone-ka ama Tablet-kan.
Android P ayaa kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho moobilkaaga kumbuyuutar Bluetooth ah ama jiir
Android P ayaa kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho taleefanka sida jiirka Bluetooth. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan muuqaalka cusub ee la imanaya nooca cusub ee nidaamka hawlgalka.
Shaashadda amniga ee Maarso 2018 ayaa hadda loo heli karaa Pixel iyo Nexus
Pixel 2 iyo Nexus horeyba waxay u leeyihiin balastarka amniga Maarso. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka balastarka cusub ee amniga iyadoo xoogaa horumar ah la sameeyay.
Android P ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka joojiso wicitaannada taleefannada iyo lambarada aan la garaneyn
Android P wuxuu soo bandhigayaa wicitaanada xayiraadda lambarrada aan la aqoon. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee la imanaya Android P.
OUKITEL WP5000, oo ah taleefan casri ah oo qalfoof leh oo leh batari 5.000 Mah, IP68 iska caabin iyo shaashadda 18: 9
Terminalka cusub ee 'OUKITEL' ee loogu talagalay dadka isticmaala ugu baahida badan ayaa ah WP5000, oo ah nooc aan u adkaysan karin oo kaliya shoog, biyo iyo siigo aan biqil lahayn, laakiin sidoo kale na siinaya batari 5.000 Mah iyo 18: 9 shaashad
Telegram-ka kama shaqeeyo inta badan Yurub
Telegram-ka kama shaqeeyo inta badan Yurub sababo la xiriira dhibaatooyin aan la garanayn oo ay shirkaddu u orodday inay ka qirto baraha bulshada sida Twitter
Samsung waxay joojineysaa sii deynta cusbooneysiinta amniga qaar ka mid ah boosteejooyinka 2016
Shirkadda laga leeyahay Kuuriya ee Samsung ayaa ku dhawaaqday boosteejooyinka joojin doona helitaanka wararka amniga oo ku biiri doona barnaamijka cusbooneysiinta amniga bil kasta iyo saddexdii biloodba.
Ka faa'iideyso Google Keep tabahaan
4 Tilmaamood si aad uga faa'iidaysato Google Keep. Soo ogow xeeladahan fudud ee kuu oggolaan doona inaad u adeegsato dalabka sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Codsiyada ugu wanaagsan ee Android ee loogu talagalay daryeelka xayawaankaaga
Codsiyada ugu wanaagsan ee Android ee loogu talagalay daryeelka xayawaankaaga. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulashada barnaamijyadan aad si fiican ugu daryeesho xayawaannadayada.
Ciyaaraha toogashada ee ugu wanaagsan Android
Ciyaaraha toogashada ee ugu wanaagsan Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulkan cayaaraha toogashada ee aad hadda ku soo dejisan karto taleefankaaga Android.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android si ay u abaabulaan Sawirada Gallery
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android si loo abaabulo sawirradaada sawirada. Kala soo bax xulashadan codsiyada ugu fiican ee ku jira qaybteeda.
Ciyaaraha xiisaha leh ee ugu wanaagsan Android
Ciyaaraha ugu xiisaha badan ee garaafyada ee Android. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan ciyaartan xiisaha leh oo aad hadda kala soo bixi karto taleefankaaga Android.
Sida loo hubiyo amniga Wifi-gaaga oo aad u ogaato aaladaha ku xiran
Codsi fudud oo aan ku hubin doonno amniga shabakadeena Wifi, aaladaha ay ku xiran yihiin iyo nuglaanta suurtagalka ah, xitaa internetka waxyaabaha.
Ciyaaraha fardaha ee ugu wanaagsan Android
Ciyaaraha fardaha ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulkan shanta kulan ee faraska loogu talagalay Android ee aan hadda kala soo dagsan karno taleefankeena.
Taleefannada casriga ah ee Nubia ee soo socda ayaa la iman doona Android saafi ah
Taleefannada casriga ah ee Nubia ee soo socda ayaa la iman doona Android saafi ah Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda Shiinaha ee ah adeegsiga noocyadan nidaamka qalliinka.
Akhristayaasha ugu wanaagsan ee PDF ee loogu talagalay Android
Shanta aqristayaasha ugu fiican PDF-ka ee loogu talagalay Android ayaa hadda la heli karaa Kala soo bax xulashadan akhristayaasha ugu fiican PDF ee aan hadda kala soo bixi karno Android.
Codsiyada ugu wanaagsan ee lagu raaco qiimaha cryptocurrencies
Codsiyada ugu wanaagsan ee lagu raaco qiimaha cryptocurrencies. Soo ogow barnaamijyadan aad kula socon karto qiimaha cryptocurrencies mar walba.
Dib-u-habeynta Opera biraawsarku aad ayuu uga dhakhso badan yahay Chrome
Maanta waxaan idiinku soo bandhigayaa muuqaal isbarbardhig ah oo noocan ah, tusaale muuqaal iyo muuqaal ah oo aan ku tusayo sida biraawsarka Opera Web-ka ee la cusbooneysiiyay uu uga dhakhso badan yahay Google Chrome. Kaalay, timaha sii !!!
Codsiyada aan ahayn sida ay u muuqdaan, maanta ayaa ah raadiyaha ugu xun adduunka
Waxaan la laabaneynaa qeybta codsiyada oo ah waxa ay noo muuqdaan, markan qaab wanaagsan maaddaama aan soo bandhigi doono oo aan kugula talin doono barnaamij la yiraahdo Raadiyaha ugu xun adduunka. App aad jeclaan doonto.
Honor 7X wuxuu helaa beta-ka Android 8.0 Oreo ee Spain
Android 8.0 Oreo beta wuxuu gaaraa Sharafta 7X ee Isbaanishka. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga barnaamijka beta ee loogu talagalay dadka isticmaala bartamaha dhexe ee nooca Shiinaha.
Hada kahor waad iska diiwaan galin kartaa Harry Potter: Hogwarts Mystery
Diiwaangelin hore Harry Potter: Hogwarts Mystery hadda wuu furan yahay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan furitaanka diiwaangelinta hore ee ciyaarta caanka ah ee taxanaha ah.
Cusboonaysiinta amniga bisha Febraayo ee Galaxy S8 iyo S8 + hadda waa la heli karaa
Cusboonaysiinta amniga ee bisha Febraayo ee loogu talagalay Galaxy S8 iyo S8 + ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo iyada oo loo marayo terminaal la jaan qaadi kara.
Kaliya laba nooc oo Android ah ayaa bixiya taageero nabadgelyo oo wanaagsan
Kaliya laba magac oo Android ah ayaa bixiya taageero nabadgelyo oo wanaagsan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan warbixintan amniga ee muujineysa dhibaatooyinka ku jira Android.
Ka soo dejiso apk Twitter-ka iyada oo la shaqeyneysa si aad u keydiso walxaha si aad mar dambe u aragto
Soo dejiso oo rakib apk Twitter-ka oo leh shaqeynta si aad u keydiso walxaha si aad hadhow u aragto, shaqeyn cusub oo aan weli ku jirin nooca aad ka soo dejisan karto Bakhaarka Play Store.
Android P waxay lahaan doontaa taageero asalka ah iskaanka iris oo ah hab lagu furo
Android P waxay lahaan doontaa taageero u gaar ah qalabka 'iris scanner'. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka qalabka iris-ka ee qalabka Android P sanadkan.
Hangouts Chat: Codsiga farriinta cusub ee shirkadaha hadda ku yaal Play Store
Hangouts Chat: Codsiga farriinta ee shirkadaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan codsigan Google ee horeyba looga heli jiray Play Store.
ASUS Zenfone Max M1: ASUS-ka cusub ee wata batari weyn ayaa lagu soo bandhigay MWC
ASUS Zenfone Max M1: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee ASUS ee lagu soo bandhigay MWC 2018.
Nooca caalamiga ah ee Xiaomi Mi 6 wuxuu bilaabmayaa inuu cusbooneysiiyo Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo wuxuu gaarayaa nooca caalamiga ah ee Xiaomi Mi 6. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefanka sare ee dhamaadka Shiinaha.
Nolosha batteriga ee Galaxy S8 iyo S8 + waxay aad ugu egtahay tan Galaxy S9 iyo S9 +
Tirooyinka rasmiga ah ee isticmaalka batteriga ee ay bixiyaan Galaxy S9 iyo Galaxy S9 cusub ayaa ficil ahaan la mid ah kuwa aan ka heli karno kii ka horreeyay, marka laga reebo isticmaalka batteriga marka muusikada la ciyaarayo.
Soo ogow taleefannada Android Go ee lagu soo bandhigay MWC 2018
Telefoonada Android Go ee lagu soo bandhigo MWC 2018. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefannada adoo adeegsanaya nooca nalka ee nidaamka hawlgalka ee lagu soo bandhigay munaasabadda caanka ah.
Kubbadda Dragon. waraaqaha ugu fiican, codadka dhawaaqa, majaajillada iyo waxyaabo kale oo badan
Fiidiyowga aan ku tusayo sida loo soo dejisto sawirrada tayada sare leh ee taxanaha 'Dragon Ball', si fiican, sawirrada, wicitaanada iyo ogeysiinta ama digniinta, majaajillada, filimada, iwm, iwm.
La kulan Energizer Hardcase H590S, mobiil leh batari 5800mAh
Shirkadda Faransiiska ah ee Avenir Telecom, ayaa ku dhawaaqday Energizer Hardcase H590S, oo ah taleefan casri ah oo leh astaamo iyo tilmaamo farsamo oo u qalma meel dhexaad ah oo leh batteri, wax intaas ka badan iyo wax ka yar toona, 5.800mAh. Baro taas!
Samsung waxay xaqiijineysaa taageerada Treble ee Galaxy S9 iyo S9 +
Samsung Galaxy S9 iyo S9 + waxay leeyihiin taageero seddex geesood ah. Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta shirkadda si aad u taageerto mashruucan.
Nokia 3 waxay ku heshaa Android 8.0 Oreo qaab beta ah
Android 8.0 Oreo waxay ku timaadaa Nokia 3 qaab beta ah. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo dhaca taleefanka nooca ah ee ugu dambeeya ee la cusbooneysiiyo.
Kuwani waa telefoonada Android One ee lagu soo bandhigey MWC 2018. Waxbadan ka baro taleefannada lagu soo bandhigey munaasabadda oo leh noocaan ah nidaamka qalliinka.
Laga soo bilaabo MWC18 waxaan ku tusaynaa sida ay u shaqeeyaan Art Emojis-ka cusub ee Samsung Galaxy S9 iyo S9 Plus
Fiidiyow laga duubay MWC18 kaas oo aan ku tusayo sida farshaxanka cusub ee Emojis ee Samsung Galaxy S9 iyo Samsung Galaxy S9 Plus u shaqeeyaan
Android P ugu dambeyntii ma bixin doono mawduuc mugdi ah shaashadda nooca OLED
Nooca xiga ee Android, Android P, ayaa asal ahaan isku dari doona mawduuc mugdi ah si loo yareeyo isticmaalka batteriga ee terminaalka shaashadda nooca OLED.
Barnaamijyada yoga ugufiican ee loogu talagalay Android
Barnaamijyada yoga ugufiican ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan codsiyada ugufiican ee aad ku tababaran karto yoga guriga.
Ciyaaraha ugu fiican iyo ciyaaraha qarsoodiga ah ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu fiican iyo ciyaaraha qarsoodiga ah ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan dambiyada ugu fiican iyo ciyaaraha qarsoodiga ah ee hadda la heli karo.
Beddelka ugu fiican ee Swype loogu talagalay Android
Beddelka ugu fiican ee Swype loogu talagalay Android. Soo ogow shantaan teebabka oo si fiican u beddeli kara arjiga Swype ee dhowaan la dhammaystiray
Barnaamijyada ugu fiican ee karinta ee loogu talagalay Android
Barnaamijyada ugu fiican ee karinta ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan dalabyada isku-darka ee dhammaan dhadhanka la heli karo si aad ugu dejiso taleefankaaga casriga ah.
Codsiyada ugufiican ee lagu barto ku heesida Android
Codsiyada ugufiican ee lagu barto ku heesida Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan codsiyada la heli karo si aad u barato farsamooyinka oo aad u kululeyso codkaaga.
Ciyaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha loogu talagalay Android ee na siiya ikhtiyaarka isticmaalka habka ciyaartoy badan.
Codsiyada lagu xakameynayo isticmaalka aad ka sameyso moobaylkaaga
4 Codsiyada lagu xakameynayo isticmaalka aad ka sameyso moobaylkaaga. Soo ogow barnaamijyadan kaa caawinaya inaad ka fogaato balwadda taleefanka oo aad isticmaasho masuuliyad.
Taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ee leh Android Go ayaa ka soo muuqan doona MWC 2018
Taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ee Android Go waxay imaan doonaan MWC 2018. Faahfaahin dheeraad ah ka hel warka ay Google ku dhawaaqday ee ku saabsan nooca nalka nidaamka hawlgalka.
Energizer Power Max P16K Pro, mobiil leh 16000mAh baytari oo lagu soo bandhigi doono MWC-ka Barcelona
La kulan Energizer Power Max P16K Pro, moobil kaas oo soo saaruhu uusan ku dhicin ismaamulkiisa, waana taas, sida laga soo xigtay shirkadda koronto koronto, P16K wuxuu ballan qaadayaa in ka badan toddobaad iyadoo celcelis ahaan la adeegsanayo ma nihin waa inaan ka walwalsanahay fiilo. Waan kuu balaarinay!
Codsi ka dhigi doona Android-kaaga wax soo saar badan. Hada xor ah hal maalin oo kaliya !!
Fiidiyoow aan ku tusayo barnaamij ka dhigaya mid aad wax soo saar badan u leh Android, barnaamij kaas oo hadda saacado yar aad awoodi doontid inaad ku soo dejiso nooca lacag la’aan ah ee bilaashka ah.
Samsung ayaa dib u cusbooneysiisay cusbooneysiinta Android Oreo ee Galaxy S8
8 maalmood ka dib markii dib loogu rogay cusbooneysiinta Galaxy S8 ee ka socda Android Oreo, shirkadda Kuuriya ayaa soo saartay nooc cusub oo kama dambeys ah oo leh dhibaatada dib-u-hagaajinta.
Isbitaalka Maskaxda: Eastern Bloc 2, ciyaar naxdin leh oo ah qaabka loo yaqaan 'Silent Hill' oo bilaash ah waqti xaddidan
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha naxdinta leh ee loogu talagalay Android qaabka ugu fiican ee Silent Hill, u orod inaad kala soo baxdo Isbitaalka Maskaxda: Bariga Bloc 2 illaa hadda iyo waqti xaddidan waxaan ku heli karnaa gebi ahaanba bilaash.
3D Sourround Music Player, ma mudan tahay in lagu bixiyo ku dhowaad 11 euro barnaamij?
Falanqaynta muusikada muusiga ee loogu talagalay Android 3D Sourround Music Player, ciyaaryahan aan isku dayi karno bilaash 15 maalmood kadibna wuxuu ku kacayaa ku dhowaad 11 Euro. Laakiin ma mudan tahay in la bixiyo kuwa ku dhow 11 Euro?
Android P ayaa xannibi doonta helitaanka makarafoonka barnaamijyada asalka
Android P waxay xayiraysaa marin u helka makarafoonka barnaamijyada ku jira asalka. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka cusub ee hawlgalka ee doonaya inuu ilaaliyo asturnaanta isticmaalaha.
Samsung Galaxy Note 8 wuxuu ku saabsan yahay inuu cusbooneysiiyo Android 8.0 Oreo sida uu qabo WiFi Alliance
Qoraalka Samsung Galaxy Note 8 wuxuu ku dhow yahay inuu helo Android 8.0 Oreo sida ku cad xogta daatay ee ka timid WiFi Alliance kaas oo magaca nooca qalabkani ku soo muuqanayo noocaan nidaamka hawlgalka. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta!
Android P waxay xayiraysaa marin u helka kamaradaha barnaamijyada asalka
Android P waxay xayiraysaa marin u helka kamaradaha barnaamijyada asalka. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee imanaya nidaamka hawlgalka.
Sida loo diro WhatsApp adigoon badbaadin xiriirka
Cashar fudud oo ficil ah oo aan ku tusayo sida loo diro WhatsApp adigoon badbaadin xiriirka xiriirka ajandaheena shaqsiyadeed, kaliya ogaanshaha lambarka taleefanka ee qofka aan dooneyno inaan la xiriirno.
Sida warshad dib loogu dhigo Android. (Siyaabo kala duwan xitaa haddii terminal-ka uusan daarin)
Tababarka fiidiyowga ee fiidiyowga ah ee 'Android' kaas oo aan ku tusayo sida dib loogu cusbooneysiiyo Android warshadda siyaabo kala duwan, laga bilaabo moodooyinka kala duwan ee boosteejooyinka leh lakabyo kala duwan oo habeyn ah iyo ka soo kabashada haddii ay dhacdo in Android uusan daaran.
Ciyaaraha ugu fiican ee aan dhammaadka lahayn ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican ee aan dhamaadka lahayn ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulashada ciyaartan noocyadan aan hadda ku soo dejisan karno aaladaha Android.
Ciyaaraha badbaadada ugu fiican ee Android
Afarta kulan ee badbaadada ugu fiican ee Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee aan ka heli karno noocgan aaladaha Android.
Barnaamijyada ugu fiican ee xaqiiqda dalwaddii loogu talagalay Android
Afarta barnaamij ee xaqiiqda dalwaddii ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan u adeegsada xaqiiqda dhabta ah 'Android'.
Barnaamijyada waxbarasho ee ugufiican caruurta ee kujira Android
Barnaamijyada waxbarasho ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay carruurta ku jirta Android. Kala soo bax xulashadan shan codsi oo ka caawiya carruurta inay wax bartaan.
Kuwani waa 19-kii codsi ee Bitcoin ka qoday Android-ka iyada oo aan fasax laga haysan
Shirkadda amniga ee Sophos ayaa daabacday warbixin ay na tuseyso 19 codsi oo laga heli karay Play Store isla markaana u oggolaatay horumariyayaashu inay qodan karaan waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyaga oo aan raalli ka ahayn.
Barnaamijyada Android si ay uga soo kabtaan faylasha la tirtiray
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android si ay uga soo kabtaan faylasha la tirtiray. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulitaanka barnaamijyada aan ka heli karno soo celinta faylasha la tirtiray ee ku jira Android.
Shan talo si aad uga dhigto taleefankaaga Android inuu sii dheeraado
Talooyin ku saabsan telefoonkeena Android inuu sii dheeraado. Soo hel taxanahan taxanaha ah ee qalabkeenna uga dhigaya mid si fiican u shaqeynaya muddo dheer.
Ciyaaraha macquulka ah ee ugu wanaagsan Android
Lixda kulan ee ugu macquulsan ee laga heli karo Android. Baro xulashadan cayaaraha ugufiican nooc caqli gal ah oo aad kusoo dejisan karto Android.
Samsung ayaa ku wargalinaysa sababta keentay ka bixitaanka cusboonaysiinta Oreo ee Galaxy S8
Ka noqoshada cusbooneysiinta Android Oreo ee loogu talagalay Galaxy S8 waxay u sabab tahay dib u habeynta qalabka meeshii lagu rakibay.
Barnaamijyo lagu daawado TV-ga ku shaqeeya Android
Shan codsi oo lagu daawado TV-ga ku shaqeeya Android. Soo ogow shantaan barnaamij ee aan ku daawan karno telefishanka taleefannadeena Android.
Google wuxuu ku dhawaaqayaa, markale, aaladaha loo cusbooneysiiyay Android Oreo iyo kan dhawaan sameyn doona
Cusboonaysiinta cusub ee cusub ee nidaamka hawlgalka ee Android ee loogu talagalay smartwatches waxay gaari doontaa 5 aalado cusub, sida ku cad liiska ay Google hadda ku cusbooneysiisay boggeeda.
Faahfaahinta cusub ee xaday ee Xiaomi Mi Mix 2S ayaa soo ifaysa ... waa dhab!
Waxaan horeyba uga ogaanay wax badan oo ku saabsan Xiaomi Mi Mix 2S, oo ah terminaal la imaan doona sideed-core Qualcomm Snapdragon 845 processor, 8GB oo RAM ah, 256GB oo ROM ah, iyo astaamo kale oo ka dhigi doona tartan adag oo ku saabsan dhamaadka-sare ee Android Laakiin waxa ugu fiican wax walba waa inay dhab tahay! Waan kuu balaarinay!
NOMU S50 Taxanaha: Taleefanka casriga ah ee ugu horreeya leh oo leh 18: 9 shaashad iyo Android 8.1 Oreo
NOMU S50 Taxanaha: Taleefanka casriga ah ee ugu horreeya leh oo leh 18: 9 shaashad iyo Android 8.1 Oreo. Ka ogow wax badan oo ku saabsan aaladda cusub ee sumadda ee imaan doonta MWC 2018.
Xusuusashada Android: Music Player 3 [APK]
Waxaan dib ugu laabaneynaa waqtigii aan kuugu soo qaadan lahayn muusikada muusikada 3 qaab jumlad ah, taas oo ahayd mid ka mid ah codsiyada ugu fiican iyo ciyaartoyda muusikada ugu caansan ee loogu talagalay Android waqtigeeda.
No App: Codsiga aan waxba qaban oo horeyba u lahaa wax ka badan 1 milyan oo soo degsasho ah
No App: Codsiga aan waxba qaban oo horeyba u lahaa wax ka badan 1 milyan oo soo degsasho ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan codsigan xiisaha leh ee ku dhuftay dukaanka Play.
Samsung waxay joojineysaa cusbooneysiinta Android Oreo ee loogu talagalay Galaxy S8 iyo S8 +
Samsung waxay joojineysaa cusbooneysiinta Android Oreo ee loogu talagalay Galaxy S8 iyo S8 +. Wax badan ka ogow go’aanka shirkadda Kuuriya lagu qasbay inay qaadato.
Malaayiin ka mid ah taleefannada gacanta ee loo yaqaan 'Android phones' ayaa qaba cudurka loo yaqaan 'cryptocurrencies'
Malaayiin telefoonada Android ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qodo macdanta loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyadoo aan la ogeyn.
[APK] Sida loo helo dhammaan emulators-yada iyo cayaaraha bilaashka ah barnaamijkaaga 'Android'
Tababbarka fiidiyowga ee la taaban karo oo aan ku tusayo sida loo helo dhammaan emulatorska iyo cayaaraha si bilaash ah oo loogu raaxeysto bartaada Android.